ब्रेकिङ: आफ्नै विद्यार्थी बलात्कार गर्ने ‘हेड मास्टर’माथि नेकपाले यसरी गर्‍यो कारवाही ! — Sanchar Kendra
ब्रेकिङ: आफ्नै विद्यार्थी बलात्कार गर्ने ‘हेड मास्टर’माथि नेकपाले यसरी गर्‍यो कारवाही !
काठमाडौं, ७ चैत ।
आफ्नै छात्रा विद्यार्थीलाई बलात्कार गर्ने एकजना शिक्षकमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनकारवाही गरेको छ । रामेछापको नामाडी बेतालीस्थित श्री जनजागृती उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोबिन्द खत्रीमाथि नेकपाले कारवाही गरेको हो ।
सोहि विद्यालयमा ८ मा अध्ययनरत १४ बर्षिया छात्रालाई खत्रीले पटकपटक बलात्कार गरेको भन्दै कालोमोसो दलेको छ भने भौतिक कारवाही समेत गरेको बताईएको छ ।
पिडित पक्षको उजुरीपछि बुधबार दिउसो विद्यालय हातामै पुगेर नेकपाले खत्रीमाथि कारवाही गरेको नाम बताउन नचाहाने १ जना प्रत्यक्षदर्शीले त्यहाँबाट इमान्दार मिडियालार्इ जानकारी दिए ।
खत्रीमाथि नेकपाले जनकारवाही गरेको खबर सुनेर स्थानीय खुसी भएको समेत उनले बताए । घटनाबारे थप बिबरण आउन बाकीं छ ।
खत्रीमाथि कारवाही गरेपछि नेकपाले निकालेको वक्तव्य
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
पालना नगरे सरकारसंग भएको तीनबुँदे सहमति तोडिने विप्लवको चेतावनी
विप्लवले यसरी गरे अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन, १२ तस्विरमा हेर्नुहोस
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा कैलालीमा २२ बिगाहा जग्गा कब्जा